Nhau - Chipfeko chechizvarwa chemagetsi ezuva chinogona kutsiva silicon
Chipfeko chekugadzira simba rezuva chinogona kutsiva silicon
Parizvino, imwe yemhando ye "mashiripiti" yekupfeka inogona kushandiswa kutsiva "silicon" mukugadzira simba rezuva.Kana ikarova pamusika, inogona kudzikisa zvakanyanya mutengo wesimba rezuva uye kuunza tekinoroji mukushandisa kwemazuva ese.
Kushandisa mapaneru ezuva kuti apinze mwaranzi yezuva, uyezve kuburikidza nemhedzisiro yefotovolt, mwaranzi yezuva yezuva inogona kushandurwa kuita simba remagetsi - izvi zvinowanzozivikanwa sekugadzira simba rezuva, iro rinoreva mapaneru ezuva echinhu chikuru " nesilicon ”.Ndizvo chete nekuda kwemutengo wakakwira wekushandisa nesilicon kuti simba rezuva harisati rave nzira inoshandiswa zvakanyanya yekugadzira magetsi.
Asi ikozvino imwe yemhando ye "mashiripiti" yekumhara yakagadziriswa kunze kwenyika inogona kushandiswa kutsiva "silicon" yekugadzira simba rezuva.Kana ikarova pamusika, inogona kudzikisa zvakanyanya mutengo wesimba rezuva uye kuunza tekinoroji mukushandisa kwemazuva ese.
Muchero wemichero unoshandiswa se pigment zvinhu
Imwe yemasangano anotungamira ekutsvagisa mumunda weSolar simba ndiyo MIB-Solar Institute paUniversity yeMilan Bicocca, Italy, iyo parizvino iri kuyedza nekupfeka simba reSolar inonzi DSC Technology. DSC inomirira dhayi-inosimudzira Solar Cell.
DSC Tekinoroji Iyo inokosha musimboti weiyi yezuva simba yekupfeka kushandisa chlorophyll photosynthesis.Vatsvaguriri vanoti iyo pigment iyo inoumba pendi inopinza mwenje wezuva uye inogonesa maseketi emagetsi anobatanidza iyo photoelectric system kuburitsa magetsi. shandisa muto wemarudzi ese emichero kugadzira, mira senge muto webhuruu bhabheri, rasipibheri, mutsvuku mazambiringa.Iye mavara akakodzera pendi akatsvuka nepepuru.
Sero rezuva rinoenda pamwe nekupfeka rakakoshawo. Inoshandisa yakakosha yekudhinda muchina kupurinda nanoscale titanium oxide pane template, iyo inozonyudzwa mu organic pendi kwemaawa makumi maviri nemana. Kana iko kupfeka kukagadzika pane iyo titanium oxide, iro zuva rezuva rinoitwa.
Mari, nyore, asi isingashandi
Zviri nyore kuisa. Kazhinji tinoona mapaneru ezuva akaiswa pamasvosve, padenga remba, chingori chikamu chepamusoro pechivakwa, asi pendi nyowani inogona kuiswa kune chero chikamu chepamusoro pechivakwa, kusanganisira girazi, saka zvakanyanya inokodzera zvivakwa zvemahofisi Mumakore apfuura, chimiro chekunze chemarudzi ese ezvivakwa zvirefu pasi rese zvinokodzera rudzi urwu rwemasimba ezuva kupfeka.Tora chivakwa cheUniCredit muMilan semuenzaniso. Rusvingo rwayo rwekunze runotora huwandu hwenzvimbo yekuvaka. Kana iyo yakaputirwa nezuva simba rekugadzira pendi, inodhura-inoshanda kubva pakuona kwekuchengetedza magetsi.
Mukureva kwemutengo, pendi yekugadzira magetsi zvakare iri "mari" kupfuura mapaneru.Magetsi ezuva-emagetsi anodhura chikamu chimwe muzvishanu zvakanyanya sesilicon, iwo musimboti wezvinhu zvemagetsi ezuva.Izvo chaizvo zvinoumbwa ne organic pendi uye titanium oxide, zvese zviri zviviri zvakachipa uye zvakagadzirwa nemasaisai.
Kubatsira kwekupfekedza hakusi chete kuti kwakachipa mutengo, asi zvakare kuti iri zvakanyanya kugadzirisa nharaunda kupfuura mapaneru e "silicon." Inoshanda mumamiriro ekunze akashata kana mamiriro akasviba, senge kune mafashama kana mambakwedza kana manheru.
Ehezve, iyi yemhando yezuva yekupfeka simba ine zvakare kushaya simba, iyo haina kusimba senge "silicon" bhodhi, uye kugona kwekutora kwakadzikira. Solar mapaneru anowanzo ave nehafu pasherefu yemakore makumi maviri nemashanu, vatsvagiridzi vakati. yezvigadzirwa zvemagetsi ezuva zvakaiswa makore makumi matatu kusvika makumi mana apfuura zvichiri kushanda nhasi, nepo hupenyu hwekugadzira hwesimba remagetsi ezuva riri makore gumi nemashanu chete; Solar mapaneru ane gumi neshanu muzana anoshanda, uye machira-anogadzira magetsi anenge hafu seanoshanda, painenge 7 muzana.